Badhaadhe oo laga mamnuucay ugaarsiga
Badhaadhe oo laga mamnuucay ugaarsiga
Maamulka degmada Badhaadhe ayaa mamnuucay ugaarsiga door-joogta dib ugu soo noqoneysa dhulka hawdka ah ee gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiye xigeenka degmada Maxamed Muxumad ayaa Raadiyoow Ergo u sheegay in mamnuucistu ay ka dhaqan-galeyso dhul hawd ah oo dhan 180km oo isku wareeg ah oo ku yaal xadka Soomaaliya ay la wadaagto Kenya.
Dhulkaas wuxuu ku yaal inta u dhaxeysa degmada Badhaadhe, deegaanka Kulbiyow iyo magaalada Xeebta ah ee Raaskaambooni oo duur-joog raxan raxan u socota lagu arkay horraantii bishan markii ugu horreysay muddo sanado ah. “Qofkii la qabto isaga oo dilaya ama dilay ugaar, maamulka ayaa kala wareegi doona hubkiisa. Wuxuu sidoo kale muteysan doonaa bil xarig iyo lacag ganaax ah oo $200 ah,” ayuu yiri Maxamed. Maamulka degmada Badhaadhe waxa ay sidoo kale mamnuuceen iibinta hilibka ugaarta iyada ooqofkii ku luglahaada uu muteysan doono labaatan maalin oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $100.
Amarka maamulka degmada ayaa dabo-socda kadib markii door-joog raxan raxan u socota oo isugu jira Gorayo, Geri, Lo’gisi, Siigga, maroodi, libaax iyo Shabeel dib loogu arkay deegaanada oo horey u ahaa keymaha ugu weyn ee duur-joogta Soomaaliya ay ku noolaayeen. Halkaa waxaa ka howl-geli jiray ciidankii ilaalinta duurjoogta ee dowladdii kacaanka si ay uga hortagaan ugaarsiga. Duur-joogtaan oo la rumeysan yahay in markii hore ay hawdkaas uga qaxeen ugaarsiga xadka ka baxay ee burburkii dabo-socday ayaa hadda kasoo qaxay dagaalka ciidamada dowladda Kenya iyo kooxda Shabaab ku dhexmaraya keymaha Kenya ee Boni ee ku dhow xadka Soomaaliya.
Dadka xoolo-dhaqatada ah ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in qulqulka duur-joogta soo qaxday aad looga dareemayo tuulooyinka iyo dhulka daaqsimeedka xoolaha. Xasan Cabdi oo ah reer guuraa mudo dheer ku nool tuulada Fiila oo 10km u jirta deegaanka Kulbiyoow ayaa sheegaya in duur-joog raxan raxan u socota lagu arkayo meel walba oo tuulada ka mid ah, iyaga oo aan waxyeelo u geysaneynin xoolaha iyo dadka la jira. “Ugaartaas oo aan aragno waxaa noogu dambeysay 1995-tii. Aad baan ugu faraxsanahay inay dib u soo noqdaan waayo waa quruxda dhulkeenna,” ayuu yiri Xasan oo la hadlay Raadiyoow Ergo.
Si kastaba, dib usoo noqoshada ugaartan ayaa lala xariirinayaa ugaarsiga oo hoos u dhacay Soomaaliya iyada oo dadkii ugaarsiga ku noolaa ay magaalo-galeen noqdeen, sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Badhaadhe Maxamed Muxumed. Maxamed wuxuu amarka maamulka degmada ku sheegay in looga goleeyahay ilaalinta ugaartan dib ugu soo noqotay.
Maxamed Sahal Cumar/FM/ MR